सुन तस्करीको पैसा बाजेकाे सेकुवामा लगानी: लोकप्रिय ब्रान्डको भविष्य अन्याेलमा - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
सुन तस्करीको पैसा बाजेकाे सेकुवामा लगानी: लोकप्रिय ब्रान्डको भविष्य अन्याेलमा
नेपालमा अनुसन्धान भइरहँदा अमेरिकामा शाखा विस्तार
दीपक खरेल काठमाडौं जेठ ३१
यो त्यतिबेलाको कुरा हो जतिबेला राजधानीमा रेष्टुराँ संस्कृति विस्तार भइसकेको थिएन।
'प्लाटर' र 'पिज्जा' लोकप्रिय भएकै थिएनन्। बबरमहलको होटल रिभिजिटेडभित्र फ्रान्सेली रेष्टुराँ त थियो तर त्यहाँ एउटा वर्गको मात्र पहुँच पुग्थ्यो। यो वि.सं. २०४० दशकको सुरुवाततिरको कुरा हो।
काठमाडौंमा ठूलो संख्यामा बाहिरियाहरु आउन थालेका थिए। उनीहरुका लागि फ्रान्सेली 'एपिटाइजर' र 'मेनकोर्स' साँच्चै एकादेशकै कथाजस्तै थिए। तर २०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनसँगै काठमाडौं भित्रिने बाहिरियालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थ नजिकैको एउटा छाप्रोले आकर्षित गर्याे। बाजेको सेकुवा नाम गरेको त्यो छाप्रोबाट सर्भ हुन्थ्यो– भुजाको साथमा मूला, गाँजरका पिस र शुद्ध खशीको मासुबाट बनेको सेकुवा। यो बाहेक बाजेको सेकुवाले त्यतिबेला सेकुवा प्लेटमा थोरै भुटेको भटमास पनि राख्थ्यो।
बाजेकाे सेकुवाले सर्भ गर्ने झानेको सेकुवा
खशीको मासु खाने संस्कृतिका नेपालीका लागि बाजेको सेकुवा छिटै एउटा सशक्त स्वाद पस्कने ठाउँको रुपमा स्थापित भयो। झापाबाट २०३५ सालमा काठमाडौं आएका दीननाथ भण्डारी बाजेको सेकुवाका संस्थापक थिए। सुरुमा विमानस्थल नजिकैको खाली चउरमा सेकुवा पोल्ने उनलाई ग्राहकले बाजे भनेर सम्बोधन गर्थे। त्यसबाटै प्रेरित भएर उनले पसलको नामै बाजेको सेकुवा राखिदिए। पछि त्यही बाजेको सेकुवा अमेरिकाको न्युयोर्कसम्म पुग्यो, नेपालमै १० शाखा विस्तार भए।
व्यवसायिक रुपमा सफलताको ठूलो फड्को मारेको बाजेको सेकुवा स्थापनाको ३९ वर्षमा एउटा गम्भीर कानुनी फन्दामा परेको छ। सरकारले बुधबार ६ वटा शाखा शिलबन्दी गरिदिएको छ। ३ हजार ८ सय केजी सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्याको अनुसन्धान गरिरहेको सरकारी समितिले बाजे दिननाथका छोरा चेतनाथ भण्डारीलाई खोजी गरिरहेको छ। उनी फरार छन्।
काठमाडौं र ललितपुरमा रहेका ‘बाजेको सेकुवा’ का ६ शाखामा शिलबन्दी गरेसँगै यसको विकासक्रम स्वभाविक थियो वा कालोधनको लगानी थियो भन्ने बहस सुरु भएको छ।
मोरङ जिल्ला अदालतले बाजेको सेकुवामा संगठित अपराधमार्फत् आर्जन गरेको रकम लगानी भएको निष्कर्षसहित चेतनाथ भण्डारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ। ६ वटा 'आउटलेट' बन्द हुँदा करिब ३ सय कामदार बेरोजगार बनेका छन्। र बाजेको सेकुवाको भविष्य के हुने भन्ने अनिश्चित छ।
बाजेकाे सेकुवा शिलबन्दी हुँदा ३ सयकाे राेजगारी संकटमा
बाजेको सेकुवामा किन शिलबन्दी?
बाजेको सेकुवामा सुन तस्करीको संगठित अपराधबाट आर्जित धन लगानी भएको र मिसाएकोले व्यवसाय रोक्का राख्ने मोरङ जिल्ला अदालतको आदेशसँगै बुधबार (३० जेठ २०७५) सरकारी समितिले छापा मारेर शिलबन्दी गरेको हो।
संगठित अपराधका प्रतिवादी चेतनाथ भण्डारीको पूर्ण स्वामित्व रहेका पाँच र उनका नातेदारले सञ्चालन गरेको एक गरी ६ शाखामा सिलबन्दी गरिएको छ। सरकारी समितिले संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को धारा १५ र १६ अनुसार सम्पत्ति रोक्का राख्ने अधिकारको प्रयोग गरेको हो।
समितिको अनुसन्धानमा तीन हजार ८ सय किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डमा बाजेको सेकुवाका सञ्चालक चेतनको संलग्नतासहित प्रतिवादीका रुपमा उनीविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा वैशाख १८ मा मुद्दा दर्ता भएको छ।
नेपालमा अनुसन्धान, अमेरिकामा शाखा बिस्तार
सरकारले चैत २० मा सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डको अनुसन्धानका लागि गृहका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनाइरहँदा नेपाली ब्रान्ड बाजेको सेकुवाले अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित क्वेन्समा बाजेको सेकुवा ब्रान्डमा हिमालयन ग्रिल खोल्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो।
बाजेकाे सेकुवा विस्तारकाे टाइमलाइन
अमेरिकामा शाखा विस्तारका लागि सपरिवार अमेरिका पुगेका चेतन उतै हुँदा नेपालमा पक्राउ परेका प्रतिवादीले उनको नाम सुन तस्करीमा पोलेका थिए। सुन तस्करीकाे याेजना बनाउने जक्सन नै काठमाडौं र ललितपुरका बाजेका सेकुवा रहेकाे दाबी समितिकाे छ। ‘प्रतिवादी भण्डारीकै उपस्थितिमा तस्करी योजना बन्ने गरेको तथ्य हामीसँग छ,’ सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरिरहेका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष जोडिएका नाममध्ये उनको नाम एउटा हो। तथ्यले स्थापित गरेपछि प्रतिबादी बनाका हौं।’
एउटा नेपाली ब्रान्डमाथि धब्बा
बुवा दिनानाथ भण्डारीले चार दशक अघि सुरु गरेको व्यवसाय गत चैतमा फैलिँदै न्युयाेर्क पुगेकाे थियाे। तर त्यसमा गरिएको लगानी संगठित अपराधबाट आर्जेको कालोधन भएकाले अनुसन्धान गर्न मोरङ जिल्ला अदालतले दिएको आदेशले चेतनको व्यवसायिक उडान दुर्घटनाग्रस्त हुने खतरा बढेको छ।
‘हामीले एयरपोर्ट बाहिरको खाली जग्गामा सेकुवा पोलेर बेच्थ्यौं’, चेतनले एक वर्षअघि व्यवसायिक यात्राबारे सार्वजनिक रुपमा प्रवचन दिँदै भनेका छन्, ‘एक दिन प्रहरी आएर आमाबुवालाई लखेटीरहेको देखेँ, त्यो घटनाले मलाई निकै दुःखी बनायो। त्यसपछि म अाफैँ व्यवसायमा प्रत्यक्ष जोडिएँ।’ साे प्रवचनमा उनले एक वर्षभित्र बाजेको सेकुवा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विस्तार हुने अठाेट लिएका थिए। उनले दाबी गरेकाे ९ महिनापछि बाजेको सेकुवा अमेरिका पुग्यो। तर पछिल्लाे अवस्थासँगै भण्डारी परिवारकाे सर्घषको कथा नयाँ मोडमा पुगेकाे छ।
सम्बन्धित खबर: बाजेको सेकुवामा सुन समितिको छापा
बाजेको सेकुवाका एकजना पुराना ग्राहक भुवन पन्त भन्छन्, ‘बाउले दुःख गरेर माथि उठाएको बाजेको सेकुवालाई छोराको महत्वकांक्षाले डुबायो। छिटो धनी हुने लोभले मान्छेलाई सिध्याउँछ भन्थे त्यस्तै भएजस्ताे लाग्छ।’
वि. सं. २०३५ मा काठमाडौं घुम्न आएका दिनानाथले विमानस्थल अघिको चौरमा पोलेको खसीको मासु, भुटन, चिउरा, भुजा र अचार बेच्थे। यहीँबाट उनको व्यवसाय सुरु भएको थियो। खोटाङमा जन्मिएर झापा झरेका दिननाथको जीवनमा दुःख थियो, संघर्ष थियो। परिवार पाल्न साहराका रूपमा उनले व्यापार सुरु गरेका थिए। विमानस्थल र भन्सारका कर्मचारी नै सुरुमा दिनानाथका ग्राहक थिए। सफा, स्वादिलो र सस्तो मांसहारी खाजाको लोकप्रियता बढ्दै गयाे। विस्तार हुने क्रममा नि:शुल्क सरकारी चउरबाट दिननाथ विमानस्थल छेउकाे एउटा भाडाकाे जग्गाकाे छाप्राेमा सरे।
व्यवसायमा छोरा जोडिएसँगै २०७१ देखि बाजेको सेकुवा आक्रमक रुपमा उकालो लाग्यो। काठमाडौंका प्राइम लोकेशन’ मा आधुनिक साजसज्जासहित आक्रमक रुपमा शाखा विस्तार भए। बाजेको सेकुवा ब्रान्डमा मसला उद्योग समेत स्थापित भयो।
सम्बन्धित खबर: आखिरीतिर ‘अपरेशन फ्लाइङ गोल्ड’, तर भेटिएन साढे ३३ किलो सुन
‘सेकुवाको व्यवसायबाट फाइदा नहुने होइन तर जुन रफ्तारमा व्यवसाय चलेको थ्यो त्यो र पछिल्लो समय उसले गरेको लगानी स्वभाविक देखिँदैन’, भण्डारी बाउछोरासँग राम्रोसँग परिचित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक होटल सञ्चालन गर्ने एक व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘सुन तस्करी र लगानीको कुरा त थाहा छैन। यति बुझ्नुहोस् जसरी अघि बढेको थियो। त्यो देख्दा हामीलाई अचम्म लाग्थ्यो। अहिले आएर यस्तो सुन्नु पर्याे।’
चेतनले केही निकटस्थहरुसँग पाँचतारे होटलको योजना समेत सुनाउने गरेको उनले बताए।
त्रिभुवन अन्तरार्ष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि झन्डै चार दशकको कठोर मिहिनेत र निरन्तरतापछि बजेको सेकुवा जर्बजस्त रुपमा काठमाडौंमा स्थापित भयो। लोकप्रियताको शिखरमा पुग्यो। चेतनले याे बीचमा विमानस्थलमा हजाराैं उडान भएकाे देखे, केही गम्भीर दुर्घटना पनि हेरे। यतिका वर्ष व्यवसायकाे सफल उडान गरेकाे बाजेको सेकुवाको सम्पत्ति सरकारी अनुसन्धानको दायरामा परेसँगै यसकाे व्यवसायिक यात्रा नियन्त्रण गुमाएकाे जहाज जस्तै बन्न पुगेकाे छ। के सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा बाजेकाे सेकुवाले 'सेफ ल्यान्ड' गर्ला? यसकाे ठाेस जवाफका लागि मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला कुर्नुकाे विकल्प छैन।
भिडियाे: प्रविन काेइराला
प्रकाशित ३१ जेठ २०७५, बिहिबार | 2018-06-14 17:51:17
ओपोको पहिलो फाइभजी स्मार्टफोन, स्पोर्टन ईन्टरनेसनल ईंकद्वारा आयोजित फाइभजी सीई परीक्षणमा सफलतापूर्वक उत्तिर्ण भएको कम्पनीले घोषणा गरेको छ।